ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ(၂၇)ရက်နေ့က မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တရုတ်- မြန်မာရန်ပွဲ မြင်ကွင်း(ရုပ်သံဖိုင်) ~ ဒီမိုဝေယံ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ(၂၇)ရက်နေ့က မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တရုတ်- မြန်မာရန်ပွဲ မြင်ကွင်း(ရုပ်သံဖိုင်)
အပိုင်း(၂) (ရုပ်သံ ကိုညိုကြီး)
ဘလော့ဂ်ဂါ ကိုညိုကြီး Facebook ကပါ... Tagged ပေးတဲ့ ကိုညိုကြီးအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်...။
တချို့အသံတွေတော့ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ နားထောင်ပေးကြပါ...။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မတရားမှုတွေကို ကြုံလာရင်လည်း မခံမရပ်မနိုင် ပြောမိဆိုမိကြမှာပါ...။ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ရက်တိုဗီဇာနဲ့ ခေတ္တရောက်ရှိလာတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ် ကျောက်ကုန်သည်တွေရဲ့ စော်ကားမှုပါ...။ ရုပ်သံဖိုင်မှာ ရိုက်နှက်တဲ့ တရားခံနိုင်ငံခြားသားတွေကို လက်ထိပ်ခတ်ပေးပါလို့ ရဲတွေကို တောင်းဆိုနေတာပါ. .။ ရိုက်ပါနှက်ပါလို့ တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ပါဘူး...။ ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ့်လူမျိုးပြည်သူတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်း နည်းနည်းပါးပါးလေး လိုက်လျော အသိအမှတ်ပြုပေးကြပါဦး..။ အဓိကတရားခံ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး..။ လက်ကတော့ထိုး ခေါင်းပေါ်ရွက် ခေါ်လာပြီး လူပါးဝခွင့်ပေးထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက အဓိကတရားခံပါ...။
ဇွန်လ ၂၇ရက်က မန္တလေး ကျောက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ သတင်း ပြန်ဖတ်ချင်ရင်....http://www.demowaiyan.co.cc/2011/06/blog-post_1946.html